Umpathiswa wamapolisa uthi ufuna ukulwa ulwaphulo-mthetho eKapa – Elitsha
5th April 2018 Phinda KulaCape Town, Iyavela, Oorhulemente basemakhaya 0 Xhosa
Usapho lwakaGwadiso u Bongiwe, Lindelani no Nobuhle Balala. Umfanekiso ngoka Phinda Kula
Philippi Village, Philippi, Cape Town, South Africa
Lundandatheke emphefumlweni usapho lakwaGwadiso kwilokishi yasePhilippi kweli leKapa emva kokuba amaxhoba amane athe adutyulwa abulawa kwaze konzakaliswa omnye ngethuba ehlaselwa ngembumbulu kubusuku bangoLwesibini. Ingxelo zithi amaxhoba ebehleli kwisithuthi sehlobo lweAvanza ngethuba imoto ibidlula ithulule ngembumbulu kumaxhoba kwisitalato Nzinziniba ePhilippi.
Umqhubi we Avanza uSinethemba Gwadiso onamashumi amathathu eminyaka ubudala obetyelele amalungu osapho, ungomnye wabo bathe wasweleka. U Nobuhle Balele oneshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala nongumzala kaSinethemba uthi ngethuba kusenzeka lentlekele ebesendleleni eyothenga isonka nalapho athe weva izithonga zompu.
Amanye amaxhoba aphakathi kweshumi elinesibini ukuya kweshumi elinesithoba leminyaka ubudala.
Amalungu osapho lakwaGwadiso asazibuza imibuzo engaphendulekiyo malunga nababulali nabaqondayo ukuba abawazi amaxhoba. Abahlali batyhola abemi belizwe lase Somalia.
Namhlanje ngethuba umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uBheki Cele ebetyelele olusapho nalapho aphawule ukuba ezi zityholo zabahlali zizakuphazamisana nophando.
Loka Cele uthe abahlali abaqinisekanga ngento abayithethayo nanjengoko evakalise ukuba sele benawo umkhondo abawulandelayo. Watsho kananjalo ukuba bazokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba aba bantu babulele abantwana bayabanjwa. Umphathiswa uye wadiza ukuba bafuna ukutshintsha into yokuba iKapa lihambe phambili kwiziganeko zokubulala.
Umphathiswa uBheki Cele ephahlwe ngamapolisa aseNyanga ngexesha endwendwele usapho lwaka Gwadiso. Umfanekiso ngoka Phinda Kula
Isitishi samapolisa saseNyanga nalapho le gingqi yokubulawa kwalamaxhoba mane aphantsi kwayo, yenye yezitishi ezihamba phambili kulophulo-mthetho eMzantsi-Afrika. Esi sitishi siphala phambili ngokubulawa kwabantu kwilizwe liphela.
Ukanti umbutho olwelwa ubulungisa i Social Justice Coalition unephulo lokuhanjiswa ngokulinganayo kwenkonzo zesipolisa nalapho sebese urhulumente kwinkundla zamatyala. Lo mbutho waveza ingxelo ethelekisa isikhululo saseNyanga nesendawo yezinhanha i Camps Bay. Lengxelo ibonisa umahluko engomkhulu kuyaphi ngendlela amapolisa atyalwa ngayo eNyanga neyona inamanani aphezulu okubulawa kwabantu ne Camps Bay enamanani aphantsi kakhulu kobulawa kwabantu.
Lombutho uthi amapolisa atyalwa abe maninzi kwindawo zezinhanha ezingafuni uncedo oluninzi kuba bane nkampani zokhuseleko zabucala zibe ezi ndawo zithatha inkonzo ebekumele zincenda abantu abahluphekayo.
Also read: Ugwetywe iminyaka eyi-18 ofunyenwe enetyala lentiyo ngokubulala othandana nesini esinye
Ukanti lombutho ukwathi ukungasebenzi nokungqongophala kwezibane zasesitalatweni yenye into ebangela ulwaphulo-mthetho eluqatseleyo kwigingqi sesitishi saseNyanga.
Ukubulawa kwabantu eNyanga